Uzenza njani iileta ezintle zeepowusta | Abadali be-Intanethi
Kangangezihlandlo ezininzi siye sabona iipowusta eziye zatsala ingqalelo yethu, kungekuphela nje ngenxa yesiganeko abasibhengezayo, kodwa nangenxa yohlobo loonobumba ababenalo. Kwaye ubuzibuza ukuba loluphi uphawu lweshishini lakho oluya kujongeka njani ukuba uphumeze loo fonti. Kodwa, Indlela yokwenza iileta ezintle kwiipowusta?
Impendulo ihlala ilula: yiya kwi-Intanethi kwaye ujonge iifonti ezintle. Kodwa inyaniso kukuba zininzi iindlela zokuzenza, kwaye ungazikhupheli kwabanye. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba njani?
1 Indlela yemveli esiyilibeleyo: izandla zethu
1.1 Ukuhambisa iileta
1.2 Umnxeba obhaliweyo
2 Ezinye iindlela zokwenza iileta ezintle
2.1 Iileta ezintle zeepowusta onokuthi uzikhuphele
2.2 Zoo Alfabhethi
2.3 Iimvakalelo zokubamba
2.5 Bhuti omhle
3 Iingcebiso zokukhetha iileta ezintle zeepowusta
Indlela yemveli esiyilibeleyo: izandla zethu
Amaxesha amaninzi, xa kufuneka senze into, sihlala sikhangela kwi-Intanethi indlela esinceda ukuba sifumane le nto siyifunayo ngokulula kangangoko. Y siyalibala ukuba ukuba sizenzele ngokwethu asiyi kudala into eyodwa kuphela, kodwa sinezixhobo eziyimfuneko zokuyila.
Ngoko ke, enye yeendlela zokuqala zokwenza oonobumba abahle bepowusta kukusebenzisa izandla neentloko zethu ukucinga nokwenza abo nobumba. Yaye sikwenza njani oko? Ke, sineendlela ezininzi:
Iye yaba sefashonini kakhulu kwaye bubugcisa obusetyenziswa ngabaninzi ukuze baphumle (ezifana ne-crochet, iipuzzles okanye ezifana nazo). Ukubhala ngoonobumba bubugcisa boonobumba kwaye ngenxa yoko bukufundisa iziseko zokwenza iileta ezintle zeepowusta okanye nantoni na oyifunayo. Iziphumo ziyamangalisa, sele sikuxelela.
Unako sebenzisa ezinye zeetemplates ezikwi-Intanethi ukuba ungumqali kwaye awuyazi indlela yokusebenza kakuhle okanye, ukuba sele unombono, zama ukwenza uyilo lwakho.
Kwakhona, xa sele wenze amazwi ungaziskena kwikhompyuter kwaye uziguqule zibe yifonti eza kusetyenziswa (ngaphandle kokwenza konke ngesandla ngalo lonke ixesha ufuna ukusebenzisa loo fonti).
Kwaye eyona nto ingcono kunayo yonke kukuba, njengokuba yinto oyidalile, akuyi kubakho mntu unayo into efanayo, kwaye ukuba kukho into ephumayo iya kuba semva kweyakho. Ngeyiphi imvelaphi kunye nefuthe onalo.
Singatsho ukuba i-calligraphy sisiseko sayo yonke into kuba ukubhala ngokwalo yinxalenye yale nto. Kodwa ayiqalisi kangako, kuba ukuyilwa kwayo kusekelwe kwiialfabhethi ezazisetyenziswa ngamanye amaxesha (isiGrike, isiRoma...) nto leyo ethetha “ukukopa” into esele ikho.
Utshintshiselwano, ufumana i i-typeface ebonisa ukuba yenziwe ngesandla kwaye yahlukile. Kuba akukho nobumba babini bafana.
Apha akuzotywa kakhulu ngamagama, kodwa amagama ngokwawo abe obo bugcisa.
Ezinye iindlela zokwenza iileta ezintle
Ukongeza ekudaleni ngesandla, ezinye iindlela kufuneka udale iileta ezintle kwi-intanethi, oko kukuthi, nge-Intanethi.
ungazifumana ezinye amaphepha e web apho azakuvelisa khona iifonti zoqobo ngabanye okanye unokuziqhelanisa ngokudala owakho uyilo.
Iileta kunye neefonti.
Iileta ezimnandi zokuguqula.
Nganye isebenza ngendlela eyahlukileyo, kodwa ungazama ukubona ukuba iziphumo ziyasebenza na kwiipowusta zakho.
Iileta ezintle zeepowusta onokuthi uzikhuphele
Njengoko sisazi ukuba awusoloko unalo ixesha (okanye isakhono) sokwenza iileta ezintle zoyilo lwakho, siye saqulunqa ezinye zezona zantlandlolo sizibonileyo nezinokuthi zisetyenziswe kwiipowusta zakho (kuxhomekeke ekubeni kubaphulaphuli abathile okanye abanye).
Sawuthanda lo mthombo kakhulu kuba unobumba ngamnye sisilwanyana esibekwe ngendlela yonobumba. Ngoko uneendlela ezimbini zokusetyenziswa: kwelinye icala, ukuba inokufundwa (ukusuka kude ifundeka ngcono); kwaye, kwelinye, lisebenza njengomfanekiso ngokwalo.
Enye into ebesiyithanda kakhulu yile ikuvumela ukuba usebenzise unobumba ophezulu nasezantsi, imibala kwaye udibanise nonobumba beziphumo ezahlukeneyo. Nangona icetyiswa kubantwana, ingasetyenziselwa amashishini anxulumene nabantwana, kwiivenkile zeencwadi, iivenkile zeelekese, njl.
Le yile igqibelele izihloko okanye amafutshane kakhulu (isihloko) amagama okanye amabinzana kuba ukuba uyayisebenzisa kakubi, ipowusta iya kuba ixakeke kakhulu.
Inesitayile sesikolo esidala kodwa sanamhlanje, ke inokuba yinto enokusetyenziswa.
Le yenye yezo ngakumbi kufana nonobumba kunye nento onokuthi uyidlulise ngolo hlobo. Siyayithanda ngaphezu kwayo yonke loo nto ubuhle kodwa, xa, kuba njengoko ubona zonke iileta zidibeneyo kwaye oko kunokwenza kube nzima ukufunda ukuba kukho umbhalo omningi.
Kule meko, kwaye kwakhona umthombo ukuba yenza ngathi ibhalwe ngesandla, nayo inebhonasi enemizobo yeentyatyambo. Iya kuba yinto efanelekileyo kwiipowusta ezijonge loo mvakalelo yokuba yenziwe ngaphandle kweekhompyuter okanye iifonti, kodwa emva kwemifanekiso siyazi ukuba akunjalo.
Iingcebiso zokukhetha iileta ezintle zeepowusta
Ngoku ekubeni sikuxelele ngendlela yokwenza iileta ezintle zeepowusta, kufuneka sikulumkise. Kwaye kukuba, njengoko intle njengoko iphuma, ukuba xa uxhoma loo powusta abantu abakwazi ukufunda ukuba ithini na kwisicatshulwa, okanye kufuneka bayeke ixesha elide ukuze "baqikelele", ngoko usenokuba wenze impazamo enkulu.
Inqaku lepowusta kukutsala umdla, ewe. Kodwa kwakhona ukwazi ukubika into engaphakathi, nokuba sisiganeko, ifom, idinga, njl. Ukuba awuyifumani loo nto, kungakhathaliseki ukuba intle kangakanani na, abantu baya kuyithatha nje "njengomzobo".
Ke ngoko, xa ubhala iipowusta, gcina oku kulandelayo engqondweni:
Ngamanye amaxesha kulula kakhulu. Ngale ndlela uyaqinisekisa ukuba umyalezo wakho ufikelela ngokwenene kwabo babona ipowusta yakho.
Dlala ngemibala, kodwa kungekhona kuphela oonobumba, kodwa kunye nemifanekiso. Yindlela imifanekiso elungelelaniswe ngayo nento ofuna ukuyibhengeza.
Lumka apho le powusta iza kube ibekwe khona. Uphawu olujinga emnyango okanye efestileni yevenkile alufani noluya kuba yinxalenye yebhodi yentengiso. Konke oku kuya kuba nefuthe kuhlobo lwefonti omalukhethwe kuba kusenokwenzeka ukuba, kude lee, kunzima kakhulu ukuyiqonda.
Konke oku kuthethwayo, ngaba ukhe wacinga malunga nendlela yokwenza iileta ezintle zeepowusta eziyintsusa, eziyilayo kwaye zihlangabezane neemfuno zokuchwetheza ukuze zibukeke zilungile?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Uzenza njani iileta ezintle zeepowusta